အမျိုးမျိုးသောခေါင်မိုးစာချုပ်များ၏TÜVASAŞပြောင်းလဲမှုရလဒ် - rayhab ဖြစ်ပါသည်
25 / 07 / 2019 Levent Elmastaş လေလံရလဒ်များကို, လေလံပွဲ 0
အမျိုးမျိုးသောခေါင်မိုးအပေါ်ယံပိုင်းTüvasaş၏ degisimi လေလံရလဒ်များကို
TÜVASAŞတူရကီ Wagon စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များညွှန်ကြားမှု (TÜVASAŞ) လုပ်ငန်းခွင်ကိုနူးညံ့ 2019 ကုမ္ပဏီနှင့် TL 316471 YAĞIZတည်ဆောက်နေရရှိခဲ့လေလံဆွဲမရနောက်ဆုံးရလာဒ်များအရသိရသည်စာချုပ်ချီးမြှင့်လိုက်ပါတယ်ပြုလုပ်ခြင်းကြောင့်လေလံပြောင်းလဲမှုTÜVASAŞအမျိုးမျိုးသောခေါင်မိုးနှုန်း 2.040.345,37 အကြောင်းကိုကုန်ကျထားတဲ့ 2.671.151,67 / 20 JCC အရေအတွက်ကန့်သတ်ချက်တန်ဖိုးကို 2.100.000,00 TL ။ နုလေလံပါဝင်5ကုမ္ပဏီများကန့်သတ်တန်ဖိုးကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဖြစ်ခဲ့သည်။
နူးညံ့သော, 1 အပိုင်းပိုင်း - လက်ရှိ ondulin မိုးမိုးနှင့်တကွမိုဃ်းရွာရေကျင်း၏အမျိုးမျိုးသောစရာများ, ဒေသခံအဆောက်အဦဖုံးလွှမ်းခြင်းနှင့်တည်ဆဲ tile ကိုအမိုးမိုးခြင်းနှင့်ဖယ်ရှားတည်ဆဲသားညှပ်ပေါင်မု panel ကိုအမိုးမိုးသစ်ပြုပြင်ခြင်းစက်ရုံ၏ R & D ဌာနနှင့်ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံသည်အကျင့်ကိုအစားထိုး။ ပေးပို့အလုပ် 90 (ကိုးဆယ်) ပြက္ခဒိန်ရက်ပေါင်းထံမှကြာချိန်။
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: အမျိုးမျိုးသောခေါင်မိုးအတွက်အပြောင်းအလဲများTÜVASAŞ 09 / 07 / 2019 အပေါ်ယံပိုင်းအမှတ် 4734 ပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးဥပဒေအမျိုးမျိုးခေါင်မိုးTüvasaşအပြောင်းအလဲများဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်အမျိုးမျိုး Coating TüvasaşTüvasaşခေါင်မိုးတူရကီ Wagon စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ / Purchase ဌာနအပိုဒ် 19 အညီပွင့်လင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ ၏အပြောင်းအလဲများ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်။ တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2019 / 316471 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: MİTHATPAŞA mAh ။ အချုပ်အခြာအာဏာ CAD ။ NO: 131 54100 ADAPAZARI / Sakarya ခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 2642751660 - 2642751679 ဂ) E-Mail ကနေရပ်လိပ်စာ: https://ekap.kik.gov.tr/: satinalma@tuvasas.com.t သုံး) နူးညံ့သောစာရွက်စာတမ်းဖြစ်ပါတယ်အင်တာနက်လိပ်စာတွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည် က) သဘာဝတရား, အမျိုးအစားနုမှ ECAP / 2-ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်ဘာသာရပ်နှင့် ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: HRT ခေါင်မိုး & တံခါးအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲYaptırılacaktır၏ပြောင်းလဲခြင်း 20 / 08 / 2018 မိုးမိုး HRT နှင့်တံခါးအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲYaptırılacaktır၏မူကွဲကြောင့်ပုဒ်မပြည်သူပိုင်ဝယ်ယူရေးပညတ်တရား၏ 4734 အားဖြင့်ပွင့်လင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မည်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲခေါင်မိုးအင်ျကြီကို 19 အမှတ်အပေါ်ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်ဖလှယ်တူရကီ Wagon စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ / Purchase ဌာန HRT AND တံခါးဝTüvasaşပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်။ တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2018 / 416839 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: MİTHATPAŞA mAh ။ အချုပ်အခြာအာဏာ CAD ။ NO: 131 54100 ADAPAZARI / Sakarya ခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 2642751660 - 2642751679 ဂ) E-Mail ကနေရပ်လိပ်စာ: https://ekap.kik.gov.tr/: satinalma@tuvasas.com.t သုံး) နူးညံ့သောစာရွက်စာတမ်းဖြစ်ပါတယ်အင်တာနက်လိပ်စာတွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည် ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ် ECAP / 2-တင်ဒါဘာသာရပ် ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Ric အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲခေါင်မိုးအစားထိုး (TÜVASAŞ) 02 / 08 / 2018 တူရကီ Wagon Industries, Inc ကို Ric အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲခေါင်မိုးအစားထိုးTüvasaşတူရကီ Wagon စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ / Purchase ဌာန Ric မိုးမိုး EXCHANGE အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်အများပြည်သူဝယ်ယူရေးဥပဒေနှင့်အညီပွင့်လင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအမှတ် 4734 19 အပိုဒ်များကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်။ တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2018 / 385488 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: MİTHATPAŞA mAh ။ အချုပ်အခြာအာဏာ CAD ။ NO: 131 54100 ADAPAZARI / Sakarya ခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 2642751660 - 2642751679 ဂ) E-Mail ကနေရပ်လိပ်စာ: https://ekap.kik.gov.tr/: satinalma@tuvasas.com.t သုံး) နူးညံ့သောစာရွက်စာတမ်းဖြစ်ပါတယ်အင်တာနက်လိပ်စာတွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည် တစ်ဦး၏နူးညံ့မှ ECAP / 2-ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်ဘာသာရပ်) ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Malatya ဘူတာရုံအပြောင်းအလဲကို၏ဘိလပ်မြေနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးချဉ်းကပ်လမ်းပေါ်မိုးမိုး၏ကြမ်းပြင် 24 / 04 / 2015 STATE ရထားလမ်း Administration (TCDD)5များ၏စီးပွားဖြစ်ချဉ်းကပ်လမ်းပေါ် Malatya ဘူတာရုံအမိုးများနှင့်ကြမ်းပြင်သမ္မတနိုင်ငံအထွေထွေဒါရိုက်တာ၏လဲလှယ်၏ဘိလပ်မြေ။ ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ် concreting မြေဆီလွှာ၏တစ်ဝိုက်စီမံခန့်ခွဲရေးကိုမှန်ကန်ပိုင်ဆိုင်မှု MALATYA GAR မျက်နှာဖုံးပြောင်းလဲခြင်းနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးချဉ်းကပ်လမ်းပေါ်ခေါင်မိုးအများပြည်သူဝယ်ယူရေးဥပဒေနှင့်အညီပွင့်လင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအမှတ် 4734 19 အပိုဒ်များကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်။ တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2015 / 43777 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: INÖNÜရပျကှကျ STATION ကိုလမ်းပေါ်မှ 44070 MALATYA Merkez / Malatya ခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 4222124800 - 4222124820 ဂ) E-Mail ကနေရပ်လိပ်စာ: xnumxbolgeinsaatihale@tcdd.gov.t သုံးခုသည်) နူးညံ့သောစာရွက်စာတမ်း ဒါဟာမြင်နိုင်ပါသည် ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: သံလမ်းကတ်ကြေးချိန်း Carrier နှင့်ဝန်ဆောင်မှုပစ္စည်းဝယ်ယူရေးယောဘ၏ချေးမှာရှိတဲ့တူရကီက Metro စီးပွားရေးလိုင်းအစားထိုးလိုအပျရလဒ် 13 / 09 / 2013 တူရကီက Metro အိမ်ခြံမြေ Lines ရလဒ်များအစားထိုးလိုအပျ Carrier နှင့်တူရကီက Metro စီးပွားရေးလိုင်းအတွက်ရထားလမ်းစနစ်ဦးစီးဌာနဆေိုငျထုအတှငျးရထားလမ်းချိန်းန်ဆောင်မှုများပစ္စည်းဝယ်ယူရေးစီးပွားရေးအတ္တအထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူး 4734 အပိုဒ်အရသိရသည်န်ဆောင်မှု 19 ရေတွက်ပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးဥပဒေရလဒ်များအစားထိုးလိုအပျ Carrier နှင့်ဆေိုငျထုအတှငျးရထားလမ်းချိန်းန်ဆောင်မှုများပစ္စည်းဝယ်ယူရေးစီးပွားရေးပစ္စည်းဝယ်ယူရေး Wear Wear ဒါဟာပွင့်လင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်: တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2013 / 118280 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: ရဲတပ်ဖွဲ့အိမ်နီးချင်းပြိုင်ကားကွင်းရိပ်သာလမ်း Blok အဘယ်သူမျှမ:506330 YENİMAHALLE / တူရကီခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 3125071087 - ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: wear နှင့်ပြောင်းလဲမှုဆေိုငျထုအတှငျးရထား Carrier ၏တူရကီက Metro စီးပွားရေးလိုင်းအစားထိုးလိုအပျသောရလဒ်များကို 30 / 09 / 2013 တူရကီက Metro စီးပွားရေးလိုင်းအတွက် 4734 အပိုဒ်အရသိရသည် Carrier လိုအပျရလဒ်များအစားထိုးကာအိတ်ဖွင့်တင်ဒါလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၏ 19 ပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးဥပဒေအမှတ်န်ဆောင်မှုများဆေိုငျထုအတှငျးရထားလမ်းချိန်းန်ဆောင်မှုများပစ္စည်းဝယ်ယူရေးစီးပွားရေးပစ္စည်းဝယ်ယူရေး Wear လိုအပ်သောလေယာဉ်တင်သင်္ဘောများနှင့်ကတ်ကြေးရထားလမ်းစနစ်ဌာနတူရကီက Metro အိမ်ခြံမြေလိုင်းများ Ray အတ္တအထွေထွေဒါရိုက်တာ၏ရလဒ်များအစားထိုးအစားထိုး Wear ထိုသို့ချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်: တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2013 / 118280 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: ရဲတပ်ဖွဲ့အိမ်နီးချင်းပြိုင်ကားကွင်းရိပ်သာလမ်း Blok အဘယ်သူမျှမ:506330 YENİMAHALLE / တူရကီခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 3125071087 - 3125071330 ဂ) အီလက်ထရောနစ် ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ဖန်ခွက်ခေါင်မိုးသက်တမ်းတိုးအတွက်အမျိုးမျိုးသောအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲအတွက်ကန်ထရိုက်တာ 04 / 05 / 2017 TÜLOMSAŞပွင့်လင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတွက်အမျိုးမျိုးသောအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲအများပြည်သူဝယ်ယူရေးပညတ်တရား၏ Glass ကိုအိမ်ခေါင်မိုးဆောက်လုပ်ရေးအလုပ် 4734 19 အပိုဒ်အမှတ်အမျိုးမျိုးအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသစ်များအစားထိုးစိုက်ပျိုးအတွက် TULOMSAS TÜLOMSAŞသစ်များအစားထိုးစိုက်ပျိုး၏အထွေထွေညွှန်ကြားမှုအညီဖန်အိမ်ခေါင်မိုးများကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်။ တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2017 / 206673 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: Ahmet ကြက်မွေးမြူရိပ်သာလမ်း 26490 Tepebasi / ESKİŞEHİRခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်:0(222) 224 00 00 / 4435-4436 -0(222) 225 50 60 - 225 72 72 ဂ) E-Mail ကလိပ်စာ: နုစာရွက်စာတမ်း၏ tulomsas@tulomsas.com.t CA) အင်တာနက်လိပ်စာမြင်နိုင်ပါသည် ...
TÜVASAŞအတွက်ကိုယ်ရံတော်ပြောင်းလဲ 04 / 10 / 2012 TÜVASAŞအီဘရာဟင် Ertirya ညွှန်ကြားမှုအထွေထွေ၏န်ကြီးအကြံပေးသူ TCDD ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် Erol Inal ရဲ့TÜVASAŞ၏ဦးခေါင်းကိုခန့်အပ်ခဲ့သည်ခန့်အပ်သည်။ Erol Inal ဘယ်သူနည်း သူ 1949 အတွက်တူရကီတှငျမှေးဖှားခဲ့သညျ။ တူရကီ, 1975 နှစ်များတွင်မူလတန်းနှင့်အလယ်တန်းပညာရေးဖြည့်ပြီးနောက်သူတူရကီပြည်နယ်အင်ဂျင်နီယာနှင့်ဗိသုကာပညာကနေစက်မှုအင်ဂျင်နီယာအဖြစ်ဘွဲ့ရရှိခဲ့သည်။ သူကတူရကီပြည်နယ်မီးရထားတစ်နှစ် 1977 ၏အထွေထွေညွှန်ကြားမှုမှာဆောက်လုပ်ရေးဦးစီးဌာနဦးစီးဌာနအတွက်အလုပ်လုပ်နေစတင်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါဆောက်လုပ်ရေးဌာနမှူးခဲ့သူ 1992 1998 Inal ဌာနခွဲမန်နေဂျာထဲတွင်သူ YUIL အလုပ်လုပ်စတင်ခဲ့သည်။ မြင့်တက် Erol Inal Yardımcıgတာဝန်TÜVASAŞအတွက် TCDD အထွေထွေဒါရိုက်တာဖို့ 2003 2012 ခုနှစ်တွင်လည်းအထွေထွေညွှန်ကြားမှု၏ထိုင်ခုံပေါ်မှာထိုင်လေ၏။ Erol Inal လက်ထပ် ...
ကုတ်အင်္ကျီလမ်းမကြီးပြန်လည်ဆန်းသစ်အတွက် Izzet Pasha ရပ်ကွက်အတွင်း 24 / 03 / 2015 အဆိုပါရပ်ကွက်အတွင်းအတွက် Izzet Pasha လမ်းကိုဖုံးလွှမ်းပြန်လည်ဆန်းသစ်: Erzincan မြူနီစီပယ်က၎င်း၏လမ်းခင်းခြင်းနှင့်ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံအလုပ်နေဆဲဖြစ်သည်။ ဒီနှစ်မှာတော့ကတ္တရာနှင့် 30 သန်း TL ဘတ်ဂျက်မှအလုပ်လမ်းခင်း Erzincan မြူနီစီပယ်, မြို့တော်ရဲ့အရေးအပါဆုံးပြဿနာများလမ်းကိုခွဲခြားနှင့်သိသိသာသာယခုနှစ်နှင့်အတူလမ်းဘေး၏ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးရန်ရည်ရွယ်သည်။ အဓိကအားဖြင့်, အထူးသဖြင့်အဓိကသွေးလွှတ်ကြောHalitpaşa, နယူးရပ်ကွက် Barbarossa, Gülabibey, သမ္မတနိုင်ငံ, Akşemsettin, အောင်နိုင်သူ, Mimar Sinan, Inonu နှင့်လမ်းဘေးစင်္ကြံကုန်ထုတ်လုပ်မှုအပေါ်ဖျော်ဖြေခံရဖို့အလုပ်လမ်းခင်းကတ္တရာ၏ 148 ကီလိုမီတာရှည်လျားAtatürkရပ်ကွက်အတွင်း 100 ကီလိုမီတာစုဆောင်း။ Erzincan မြူနီစီပယ်ဤရည်မှန်းချက်များ Izzet Pasha ရပ်ကွက်အတွင်းအောင်မြင်ရန်အပြည့်အဝတပ်ဖွဲ့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်ဆက်လက် ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ခန္ဓာကိုယ်ဆိုင်ခေါင်မိုး-ဝတ် (TÜVASAŞ) 17 / 06 / 2016 ခန္ဓာကိုယ်ဆိုင်ခေါင်မိုး-ဝတ်TÜVASAŞတူရကီ Wagon စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ / Purchase ဌာနခန္ဓာကိုယ်ဆိုင်ခေါင်မိုးနှင့်ဘေးထွက်ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ် 4734 အမှတ်အပိုဒ်အများပြည်သူဝယ်ယူရေးပညတ်တရား၏ 19 အားဖြင့်ပွင့်လင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်။ တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2016 / 223462 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: MİTHATPAŞA mAh ။ အချုပ်အခြာအာဏာ CAD ။ NO: 131 54100 ADAPAZARI / Sakarya ခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 0264 275 16 60 - 0264 275 16 79 ဂ) E-Mail ကနေရပ်လိပ်စာ: satinalma@tuvasas.com.t သုံး) နူးညံ့သောစာရွက်စာတမ်းကိုအင်တာနက်လိပ်စာဖြစ်ပါတယ်ဤနေရာတွင်မြင်နိုင်ပါသည်: https: // SPPA ။ 2-The နုဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်၏ဘာသာရပ် kik.gov.tr/ekap/ ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Ric အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲခေါင်မိုးအစားထိုး (TÜVASAŞ)
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Malatya ဘူတာရုံအပြောင်းအလဲကို၏ဘိလပ်မြေနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးချဉ်းကပ်လမ်းပေါ်မိုးမိုး၏ကြမ်းပြင်
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: သံလမ်းကတ်ကြေးချိန်း Carrier နှင့်ဝန်ဆောင်မှုပစ္စည်းဝယ်ယူရေးယောဘ၏ချေးမှာရှိတဲ့တူရကီက Metro စီးပွားရေးလိုင်းအစားထိုးလိုအပျရလဒ်
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: wear နှင့်ပြောင်းလဲမှုဆေိုငျထုအတှငျးရထား Carrier ၏တူရကီက Metro စီးပွားရေးလိုင်းအစားထိုးလိုအပျသောရလဒ်များကို
ကုတ်အင်္ကျီလမ်းမကြီးပြန်လည်ဆန်းသစ်အတွက် Izzet Pasha ရပ်ကွက်အတွင်း
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ခန္ဓာကိုယ်ဆိုင်ခေါင်မိုး-ဝတ် (TÜVASAŞ)